လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည် ,ဒါကြောင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသို့မဟုတ်အခြားစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုပါတယ်. စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားသည်ကမ္ဘာကြီးအားမည်သို့ကျွေးမွေးသည်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်မှုလယ်ယာစနစ်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ,ထိုကဲ့သို့သောလယ်ယာစက်ယန္တရားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, လက်ကိရိယာကနေပါဝါ tools တွေကိုရန်,ထိုကဲ့သို့သောလယ်ထွန်စက်အဖြစ် ,စိုက်ပျိုးလယ်ထွန်,ရိတ်သိမ်း,ခြွေလှေ့စသည်.
သူတို့ကစက်အမျိုးမျိုးသို့တီထွင်နေကြသည်,ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကထွန်စက်နှင့်ပါဝါသို့ခွဲခြားထားတယ်,မြေဆီလွှာစိုက်ပျိုးစက်,စိုက်ပျိုးစက်,ဓာတ်မြေသြဇာ & ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရေးစက်,ဆည်မြောင်းစက်,မျိုးကွဲထုတ်လုပ်,ရိတ်သိမ်းစက်,ရိတ်သိမ်းပစ္စည်းကိရိယာများတင်ပါ,Hay အောင်စက်,စသည်တို့.
Victor လယ်ယာသုံးစက်များသည်ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်တွင်စပါးခြွေလှေ့စက်ဖြစ်သည် ,ပြောင်းဖူး sheller စက် ,မြေပဲခွံစက် ,ကွဲပြားခြားနားသော function ကိုနှင့်အတူစပါးသန့်ရှင်းစက် etc.those စက်လယ်သမားမှစပါးကြိုတင်ကိုင်တွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည့်,ဒါကလယ်သမားကိုစပါးရောင်းခြင်းထက်အမြတ်အစွန်းပိုရစေတယ်.
၄ င်း၏အားသာချက်များစွာကြောင့်ပြောင်းပြောင်းခြွေလှေ့ရန်အတွက် Power drive ပြောင်းခြွေလှေ့စက်ကိုအကြံပြုပါသည်,ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောစပါးနယ်နိမိတ်ထိရောက်မှုအဖြစ်,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးသည်, အနိမ့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် ,လွယ်လွယ်ကူကူ ,မျိုးစုံပါဝါရွေးချယ်မှု။ ၎င်းသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလှော်ခတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်း၏နောက်ထပ်အားသာချက်များရှိသည်, လျှပ်စစ် drive မှလွဲ၍ အလင်းရောင်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးကျောက်တုံးငယ်များကိုခွဲထုတ်နိုင်သည် ,၎င်းသည်ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည်ဘီးကြီးများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်.
စပါးခြွေလှေ့စက်ကို millet အတွက်အသုံးပြုသည်, ငရုတ်သီးစိမ်း, ပဲပုပ်, ပဲငယ်လေး ,ပြောင်းဖူးမှုန့်စပါးနယ်နိမိတ်။ ဒီစပါးခြွေလှေ့စက်ဟာပိုမိုထိရောက်ပြီးလုပ်ငန်းသက်တမ်းပိုမိုပါသည်။ လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည် ,ဒီဇယ်အင်ဂျင် (သို့) ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်။ များစွာသောလည်ပတ်မှုစပါးခြွေလှေ့စက်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောစက်ကိရိယာရှိသည်, မြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအား, အနိမ့်ကျိုးနှုန်း, နိမ့်ဆုံးဆုံးရှုံးမှုနှုန်း, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆင်ရေးစသည်တို့.
ပါဝါ drive ကိုစပါးသန့်ရှင်းစက်စက်ဖွဲခွဲနိုင်ပါတယ်, ဖုန်မှုန့်,တစ်နာရီကိုကီလိုဂရမ်ရာဂဏန်းမှတန်ချိန်များစွာအထိသိုလှောင်နိုင်သည့်ကျောက်တုံးငယ်လေး။ ဒီစပါးသန့်ရှင်းစက်ဟာသဘာဝလေအပေါ်မူတည်ပြီးအသုံးဝင်သည်။.
မြေပဲသည်အပူပိုင်းဒေသနှင့်အပူပိုင်းဒေသများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာစိုက်ပျိုးကြသည်, အသေးစားနှင့်အကြီးစားစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အရေးကြီးသည်။ အပင်ပစ်ခတ်မှုစက်သည်အခွံမာဖယ်ရှားရန်နှင့်မြေပဲစေ့သန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုသည့်ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။. HT စီးရီးမြေပဲခွံ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာအလွန်ကောင်းသောပစ်ခတ်နိုင်မှုဖြစ်သည်, အနိမ့်ကျိုးနှုန်း, မြင့်မားသောသန့်ရှင်းရေးနှုန်းသည်,လျော့နည်းအညစ်အကြေး,ဒီထက် kernels နှင့်အတူရောထွေး, စသည်တို့.
ပြောင်းဆန်စက်သည်အဓိကအားဖြင့်ပြောင်းဖူးအတွက်အသုံးပြုသောကိရိယာများဖြစ်သည်,ဂျုံ ,ဆန် ,ကြိတ်ခွဲပဲ ,ဒါ့အပြင်ပျိုးပင်ကြိတ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ,ထိုကဲ့သို့သောအနီရောင်ငရုတ်သီးအဖြစ်, ငရုတ်ကောင်း, ငရုတ်ကောင်း, သစ်ကြံပိုးခေါက်, yucca အမြစ်ခြောက်သွေ့, သွေ့ခြောက်သောပီလောပီနံအမြစ်, andcardamom, စသည်တို့, အတိတ်ကာလ၌,ပြောင်းဖူးမှုန့် (သို့) ဂျုံမှုန့်သည်သမားရိုးကျလက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ မြေကြီးဖြစ်သည် ,ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့အားထုတ်မှုနှင့် time.nowadays လိုအပ်သည် ,အမျိုးမျိုးသောဂျုံမှုန့်ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်စပါးကြိတ်စက်ကလယ်သမားကိုကူညီနိုင်သည်.
7.မြက် Chopper စက် / မြက်ပင်အောင်စက်
မြက် chopper စက်ကို chaff cutter machine ဟုလည်းခေါ်သည်, ကကျယ်ပြန့် forage မြက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်, လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောပြောင်းဖူးအညှာ,ကျောက်စိမ်း,ဂျုံကောက်ရိုး, ဆန်ကောက်ရိုး,ဝါဂွမ်းရိုးတံ, အခြားကောက်ပဲသီးနှံများကောက်ရိုး, စသည်တို့. ပြုပြင်ထားသောအညှာကိုကြက်အစာကျွေးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Grass chopper စက်သည်ကြက်မွေးမြူရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်,လူတစ် ဦး သည်ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုရန်မြက်နုနယ်စက်ကိုလည်ပတ်နိုင်သည်.
ထိုစက်များသည်ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်စက်ကိရိယာများ၏အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်,လယ်သမားအနေဖြင့်အချို့သောမူလကောက်ပဲသီးနှံထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ရမည် ,ထိုကဲ့သို့သောစပါးနယ်နိမိတ်အဖြစ်, သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း, လှိုင်,ခြောက်သွေ့, ငယ်ငယ်ကတည်းက,etc.Through မူလတန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကြိတ် ,လယ်သမားသည်စပါးကုန်ကြမ်းများထက်အမြတ်ပိုရနိုင်သည်.
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ,လယ်သမားကကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ် ,အချိန်နှင့်လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုသူတို့ကလယ်သမားမှစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူသို့ပြောင်းလဲစေသင့်သည် ,စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးမြင့်တက်လာခြင်းဖြင့်စျေးနှုန်းနှင့်အမြတ်အစွန်းများပိုမိုရရှိရန်စိုက်ပျိုးရေးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောအသင်း ၀ င်ဖြစ်လာသည်,ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များ၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ၏အကျိုးရှိစွာအသုံးချ.